Mhlawumbe, kunzima ukuthola umuntu okungenani akuzwakalanga ngalezi izifo esikhohlisayo ezifana izilonda esiswini kanye duodenal: i lwamafinyila ulwelwesi lesion ngenhla emizimbeni kuholela ukuphazamiseka cell umsoco izinqubo, kanjalo kubathinta ezithinta nokwakheka kwezicubu, futhi kungakho ukubhidliza imisebenzi umzimba. Ngokuvamile, isilonda kuyinto ejwayelekile isikhathi eside nge izinkathi exacerbations futhi remissions, kuye ngesikhathi somnyaka.
Kungani abantu bagule: umbono wezokwelapha
izimbangela ongaqondile izifo eziningi, kodwa agent ezinkulu causative of isilonda igciwane Helicobacter Pylori, okuyinto asezintweni isisu duodenum, futhi ngaphansi kwezimo ezithile avuse okuvela izimo eziyingozi ezifana nama-ulcer, erosions, kolwelwesi, ama-polyp, ngisho nomdlavuza. izici ezingathandeki: nokudla okungenamsoco, ukubhema, ukucindezeleka, amasosha omzimba obuthaka - kuholela ekwandeni Helicobacter Pylori, e umphumela womsebenzi kwenzeka kwi izilonda mucosal ebusweni.
Ukwelashwa nokuqhuba izifundo ekuvimbeleni izifo
Ukukhethwa ukwelashwa abanekhono futhi ngempumelelo kungaba kakhulu ukunciphisa imvamisa ukuhlaselwa nobuhlungu, ngcono isimo jikelele isiguli. Impela kahle izidakamizwa "Gastrotsepin". Izinkomba - isilonda esiswini kanye isilonda duodenal efomini oyingozi futhi ezingalapheki. Ukukhiqiza "Gastrotsepin" ngesimo izibhebhe 50 noma 150 mg, kanye nezixazululo nemijovo. izidakamizwa Intramuscularly noma ngemithambo yegazi iqondiswa for nokwelashwa izilonda, erosions ukopha yokwelapha eyinhloko izilonda ezinzima oyingozi futhi ezingalapheki elingenhla pheshana emathunjini.
Njengoba lapho sibonisa izidakamizwa ngempumelelo
Pirenzepine - isakhi esiyinhloko esebenzayo zomuthi. Kunciphisa ukukhiqizwa ayo esiswini futhi sithuthukisa ibhalansi acid-base esiswini, ngokukhetha kuvimbela uhlobo oluthile receptor behileleka okuyinto e bushelelezi imisipha futhi ngakhula uketshezi of nezindlala esiswini. Pirenzepine ngemithamo Kunconywa yokwelapha akakwazi ukungena kusivimbeli gazi ebuchosheni, okuyi-ke ukuba angene egazini ebuchosheni kungenzeka.
Indlela yokusebenzisa izidakamizwa: izinkomba kanye contraindications, umthamo
Kunoma mithi Izimo. Ayikho ngaphandle futhi "Gastrotsepin": imfundo manual iqukethe isixwayiso sokuthi izidakamizwa iziguli nge hypersensitivity kunoma yezingxenye lichaza ekwakheni, kanye ushukela galactose ukungabekezelelani engathandeki. Ephambi kwezinduna tachycardia, ukufiphala kwamehlo ingozi Hyperplasia Prostatic ukusebenzisa lo muthi kufanele kube ngokuqapha. Uma udokotela wakho ebekiwe kuwe "Gastrotsepin" imfundo manual - into yokuqala ukuthi udinga ukulalelisisa. Ukuthatha imithi ngokuvamile isigamu sehora ngaphambi kokudla ngamanzi amancane (uma udokotela akazange liqoke ukwelashwa lwemithi ezahlukene). I umthamo wansuku zonke (njengoba umthetho, 50-150 mg) kwakusakazwa ngokulinganayo usuku lonke ngemithamo ehlukene ngokwenkolo. Ngezinye izikhathi esigabeni sokuqala ukwelashwa bangathola isamba esengeziwe phakathi kosuku. Njengoba ojwayelekile, lo muthi ezinqunyiwe mg 50 kabili ngosuku - ekuseni nakusihlwa.
Umuthi 'Gastrotsepin ": isikhathi sokwelashwa, intengo
Iziguli eziningi uqaphela ubungcono angabacwasi ngokushesha ngemva kokuqala, kodwa lokhu akufanele kube isizathu ukuqedwa zomuthi noma ukunciphisa umthamo kudliwe nsuku zonke, ngaphandle uma kungenjalo enikeziwe udokotela ukuba khona. Njengomthetho, le ndlela yokwelapha "gastrotsepin" singemaviki lange 4-6. Omunye izici ezibalulekile zomuthi "Gastrotsepin" - Intengo: ke ezomhlaba mayelana ruble 350-400 iphakethe ngasinye (amaphilisi 20). Ngakho, izidakamizwa amaphilisi (5 izitsha eziyisikhombisa 2 ml, umthamo esebenzayo isithako 10 mg) cishe 750 ruble upakisha.
Imiphumela engemihle engase kwezidakamizwa ukweqisa izidakamizwa
Okufanele ukwazi, ukuthatha "Gastrotsepin"? imiyalelo Isicelo kubangela eziningi side effects lokhu imithi: kwenhliziyo, kusukela emathunjini ipheshana iziyaluyalu (uhudo, ukuqunjelwa, ukucanuzela kwenhliziyo), migraine, izinkinga ukuchama, nokungezwani komzimba nezinto - kuze kube ukushaqeka anaphylactic. Okwamanje ngemva kokudla izidakamizwa ngokweqile kubantu e umkhuba emtholampilo ke kubikiwe. Nokho, uma ukungenisa ngemithamo ngokweqile pirenzepine may ukushiselwa, ukoma futhi ububomvu kwesikhumba, tachycardia, nomlomo owomile, ileus, delirium, imisipha zibe, nokugcinwa urinary, athetosis. I Kungashiwo okufanayo mayelana ukweqisa izidakamizwa iziguli ukuthatha analogue "gastrotsepin". Uma ubuthi uma abaphathi eyodwa i umthamo ngokweqile kwezidakamizwa kudingekile kumcimbi ezivamile esiyinhloko zisusa ubuthi emzimbeni, ezifana isebenze namalahle indlela futhi lavage esiswini. Ngo ukudakwa ezinzima, esibonakala by imfiva, tachycardia ezinzima, ukusangana kanye imicabango yokuzakhela, unganikezela Jova emthanjeni zomuthi "Stigmin".
Yini iziguli uthi
Indlela ukuhlola iziguli 'Gastrotsepin "? Izimpendulo ngaye kuhluke - othile imithi esiza umuntu nomphumela ofiselekayo yayingakuthinti. Odokotela bathi eyayimbeka Baphawula iziguli zabo ccomodation. Futhi, odokotela basikisela ukuthi "Gastrotsepin" - akuyona umkhiqizo best kubantu abaphethwe izinso futhi isibindi ukungasebenzi, isifo senhliziyo, izifo imisebenzi yegilo indlala. Iphuzu elibaluleke kakhulu: awukwazi liqoke ikhambi bebodwa ngaphandle kokukhuluma nodokotela, ukuhlolisisa kwesikhashana futhi uphethwe yini. Ngokwe omunye iziguli, umphumela ukwelashwa "gastrotsepin" woza masinyane, ayinayo imiphumela eseceleni awubukelanga intombazane, naphezu kokwesaba udokotela. Nokho, kukhona izikhalazo yemiphumela emibi, akusho kunganciphisa ukusebenza zomuthi okungenani. Futhi okubaluleke kakhulu, lokho kumelwe sikhumbule ukuthi umuntu akuvunyelwe.
Ezimakethe ungathola analogue zomuthi "Gastrotsepin" izinkomba ukusetshenziswa okuyinto ziyefana ku-ejenti oshiwo ngenhla. Lawa izidakamizwa njenge "Gastrozem", "Pyrene", "Gastrotipin-Darnitsa". Isithako asebenzayo kuzo kuyafana, bayehluka izingxenye kuphela elisizayo, igama lenkampani futhi ngezinye izikhathi - intengo. Umthamo kanye umthamo lwemithi ngokuvamile efanayo ukuthi we nomuthi main. Ngokwesibonelo, analogue "gastrotsepin": izidakamizwa "Vikair", "Vikalin", "kusho uDe-Nol", "Rabirius" nabanye - nomphumela ofanayo, kodwa esekelwe isinyathelo nezinye izithako ezisebenzayo. Ideal ofanele ngawe izindlela kufanele ithathe udokotela, ikhumbula zonke izici ngamunye kanye nokuzwela yezingxenye, kanye ngesisekelo ukuhlolwa emitholampilo kanye nophenyo wezinsimbi. Ukuzizwa ubuhlungu kabi esiswini, kufanele uxhumane nodokotela. Kunoma ikuphi akunakwenzeka enothi: ngokuvamile kuphumelele futhi ngezinye izikhathi - eziyingozi nje. It isebenza ngempumelelo kuphela ezimisiwe uchwepheshe "Gastrotsepin". Yokusetshenziswa - lena nje inothi ulwazi isiguli, futhi kuphela gastroenterologist professional ungakwazi sithathe izidakamizwa kanye Isikali lilungile, unikezwa isimiso esiyinhloko - "singazilimazi".
Izidakamizwa "Eflyuren": Izibuyekezo
Umuthi 'Fluorouracil ": yokusetshenziswa, incazelo, ukwakheka, analogs kanye nokubuyekeza
Umuthi 'Khwehlela izingane zoma "
Umuthi 'Etatsizin ": analogue, yokusetshenziswa, ngempela
Amafutha kanye umthelela walesi simo emazweni umnotho womhlaba
Amanyikwe: uthobe. Amalungiselelo ekwelapheni pancreatic
Funda ukuthi ungazibekela kanjani imigomo fashion for "Skyrim"
Indlela yokuthuthukisa inkumbulo ubuchopho umsebenzi. Imidlalo for ukuqeqeshwa inkumbulo. Amavithamini ukuthi inkumbulo
Sibutsetelo imoto Hyundai Atos
Elwa namagciwane "Ampicillin trihydrate": yokusetshenziswa
Hero kabili zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa Talgat Begeldinov: Biography